रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाउँदा मरिने हल्ला, यस्तो छ वास्तविकता ! - Asian Samachar
Friday 24th , November 2017 | शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४
रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाउँदा मरिने हल्ला, यस्तो छ वास्तविकता !
Asian Samachar बिहिबार, पुस १४, २०७३ (11 months ago) बिचित्र
काठमाडौं- कवि भूपी शेरचनले भनेका थिए, ‘नेपाल हल्लैहल्लाको देश हो ।’ सायद ठीकै भनेका थिए उनले । नेपाल हल्लैहल्लाको भरमा बेलाबखत तरङ्गित हुने गरेको छ । यस्तै एउटा हल्लाको पछिल्लो संस्करणले केही दिनयता देशभर त्रास फैलिरहेको छ ।
सायद तपाईंले पनि सुन्नु भएको होला, ‘रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाउँदा मान्छे मर्‍यो रे !’ अहिले यो हल्ला ‘दिन दोगुना, रात चौगुना’ भनेझैँ फैलिरहेको छ । मानिसहरुले एसएमएस गरेर, फोन गरेर तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्ना आफन्त र साथीभाइलाई सचेत रहन भनिरहेका छन् । हल्लामा मान्छे मरेको भनिएका क्षेत्रहरुचाहिँ कसैले नुवाकोट, कसैले धादिङ त कसैले मकवानपुर भनेका छन् ।
त्यसैगरी फोन आएका भनिएका मोबाइलहरु एनसेल छन् ।यो हल्ला अहिले यति भाइरल बनिसक्यो कि कन्ट्रोल गर्नै नसकिने अवस्था छ । आम मानिसहरु त्रसित बन्न थालेपछि यसको वास्‍तविकताबारे बुझ्ने प्रयास यसरी गरीएकाे छ ।
एनसेल भन्छ, ‘हल्लाको पछि नलाग्नुस्’
हामीले यसबारे एनसेलसँग बुझ्ने प्रयास गर्‍यौँ । सुरुमा ग्राहक सेवा प्रतिनिधिसँग कुरा गर्दा उनी यो हल्लाले वाक्कदिक्क भइसकेका रहेछन् । दिनमै सयौँ कल यस्तै चासो राख्नेहरुको आउँदो रहेछ । उनले यसबारे अफिसमा पनि कुरा भइसकेको, यो हल्लामात्र रहेको निष्कर्ष निकालिएको जवाफ दिए ।
सामाजिक सञ्चालका एक प्रयोगकर्ताले एनसेलको आधिकारिक पेजमा नै जिज्ञासा राखेका रहेछन् । त्यहाँ पनि एनसेलले यो हल्लामात्र भएको जवाफ फर्काएको छ ।‘रातो नम्बरबाट आएको फोन उठाए मरिने हल्ला छ के हो यो ?’ केदार पौडेल नाम गरेका फेसबुक प्रयोगकर्ताले सोधेको प्रश्नमा एनसेलले आफ्नो आधिकारिक फेसबुक पेजबाट जवाफ फर्काएको छ, ‘कृपया यस्तो हल्लाको पछाडि लाग्न नहुन ग्राहक बर्गहरुमा अनुरोध छ ।’
धादिङ प्रहरीलाई जानकारी छैन
गाउँ-गाउँमासमेत सानातिना घटना घट्दा पनि प्रहरीलाई जानकारी हुन्छ । त्यसैले हामीले हल्लामा नाम जोडिएको जिल्ला धादिङका डिएसपी दिपेन्द्र पञ्जियारलाई सम्पर्क गर्‍यौँ । उनले त हल्लासमेत सुनेका रहेनछन् । ‘मैले त हल्ला पनि सुनेको छैन । केही भएको भए त आउँथ्यो । सायद हल्लामात्र हो यो,’ उनले भने ।
धादिङ प्रहरीकै सञ्चार शाखामा भने यस्तो हल्ला पुगेको रहेछ । सञ्चार विभागमा कार्यरत प्रहरी अधिकृत भन्दै थिए, ‘हल्ला त मैले पनि सुनेको हो । मकवानपुर तिर रे भनेर फेसबुकमा लेखेको देखेको थिएँ । तर, हामीकहाँ त्यस्तो कुनै जानकारी आएको छैन । भए त आइहाल्थ्यो नि !’
नुवाकोट प्रहरीमा केही व्यक्ति मोबाइल फाल्यौँ भन्दै आए
त्यसपछि हामीले नुवाकोट प्रहरीका डिएसपी ऋषिराम कंडेललाई सम्पर्क गर्‍यौँ । उनले हल्ला मज्जैसँग सुनेका रहेछन् । ‘हल्ला त मैले पनि सुनेको हो । अस्ति दुईतीन जना युवा ‘रातो नम्बरबाट फोन आयो त्यसपछि मोबाइल फाल्यौँ’ भन्दै हामीकहाँ आएका थिए ।
तर फोन आएको हामीले देखेनौँ । उनीहरुले नै भनेका थिए, ‘कताकता मान्छे पनि मरे रे !’ तर यो हल्लामात्र हो । यस्तो फोन रिसिभ गर्दा मरेको भनिएको कुनै पनि व्यक्तिबारे जानकारी छैन ।’यो कुरा हल्लामात्र हो भन्ने निष्कर्षमा उनी पनि पुगिसकेका रहेछन् ।
मकवानपुर प्रहरीलाई जानकारी छैन
मकवानपुरका प्रहरी इन्सपेक्टर सुरक्षा केसीले भने यस्तो हल्लासमेत आफूले नसुनेको बताइन् । ‘मैले त हल्ला पनि सुनेका छैनौँ, त्यस्तो कुनै उजुरी पनि आएको छैन,’ उनले भनिन् ।
आजभोलि ठेस लागेर लड्दा मान्छे मरेको जानकारीसमेत प्रहरीकोमा आउँछ । सानासाना घटनाबारे पनि प्रहरीलाई जानकारी गराउने प्रचलन छ । प्राकृतिक ढंगको स्वभाविक मृत्युबाहेक अन्य जुनसुकै कारणले मानिस मरे पनि पोस्टमार्टम बिना शवको दाहसंस्कारसमेत हुँदैन ।
पोस्टमार्टम अघि प्रहरीले घटनास्थलमा पुगेर मुचुल्का उठाउनुपर्छ । अब तपाईं आफैँ भन्नुस्, सम्बन्धित जिल्लास्थित प्रहरीलाई समेत जानकारी नभएको कुरा वास्तविक कसरी हुन सक्ला त ? आफ्नो परिवारका सदस्यको फोन उठाउँदा मृत्यु भयो भने चुपचाप दाहसंस्कार कसैले गर्ला ? पक्कै पनि गर्दैन ।
बरु हामीकहाँ त लास सडकमा राखेर पैसाका लागि बार्गेनिङचाहिँ हुनसक्छ । माथिका तमाम जानकारीहरुबाट पनि निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, यो हल्ला मात्र हो । हल्लाको पछि नलागौँ । बाँकी रहे सामाजिक सञ्जालमा रेड नम्बरबाट फोन आएको देखाइएका स्क्रिनशर्टहरु, ती फोटोशप्ड हुन सक्छन् । -साझा पाेष्टकाे सहयाेगमा
४५ करोड अमेरिकी डलरमा बिक्री भयोे दा भिन्चीको ५०० वर्ष पुरानो ‘पेन्टिङ’
२९ लाख डलरमा कुमारीत्व लिलाम !
चार वर्षीय बालकले गरे बलात्कार ! चिकित्सकबाट पुष्टि
फेला पर्‍यो सेतो रंगको दुर्लभ गोही
तस्करीको अनौठो तरिकाः कण्डममा ड्रग्स लुकाएर लैजान खोज्दा पक्राउ
विद्यालयले कपाल कालो पार्न लगाएपछि विद्यार्थीद्वारा मुद्दा दायर
‘प्रधानमन्त्री देउवा सुदूरपश्चिमको गौरव, शान र आशाका धरोहर’ शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४0responses
नामले होइन कामले हेवी वेट हुनुपर्छ – सञ्जय गौतम शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४0responses
१७ वर्षपछि मिस वल्र्डको उपाधी पुनः भारतीय सुन्दरीको हातमा शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४0responses
सिर्जना संवादमा मन्दिराको ‘बुधनको घोडी’माथि परिचार्चा शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४0responses
हल्लाको भरमा आंशिक बन्द शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४0responses
चितवनमा कडा प्रतिस्पर्धा, बर्दियामा वाम गठबन्धनलाई सहज
राजनीतिको नयाँ कोर्ष सुरु : शंकर पोख्रेल
शान्ति सम्झौताको ११ वर्ष : विप्लवको विवशता वा महत्वाकाँक्षा !
राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि पार्टी एकतामा बाकेँका वामनेताहरुको जोड
‘प्रधानमन्त्री देउवा सुदूरपश्चिमको गौरव, शान र आशाका धरोहर’
नामले होइन कामले हेवी वेट हुनुपर्छ – सञ्जय गौतम
NDRC Nepal bags international award for bio-diversity conservation
बाबु चुनावविरोधी गतिविधि गरेको आरोपमा पक्राउ, छोरी चुनाव प्रचारमा
नेपाल प्रहरीका ४ डिआईजीलाई एआईजीमा बढुवा
हल्लाको भरमा आंशिक बन्द शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४0responses प्रकाश भुजेल/ काडमाण्डौं, नेकपा (विप्लब) ले नेपाल बन्द गरेको भन्ने हल्लाको भरमा काठमाण्डौं उपत्यकालगायत...
अपहरणको विरुद्ध जनतानै उत्रीए प्रतिकारमा शुक्रबार, मंसिर ८, २०७४0responses रोल्पा, विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्ताले रोल्पामा एमालेका एक कार्यकर्तालाई अपहरण गरेका छन् । उनीहरुले...
एमालेको राष्ट्रवादी अडान नै जितको आधार– प्रदिप ज्ञवाली बिहिबार, मंसिर ७, २०७४0responses प्रकाश भुजेल/काठमाण्डौं, गुल्मी क्षेत्र नं. १ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि वामगठबन्धनको तर्फबाट प्रत्यासी रहेका एमालेका सचिव...
राजनीतिको नयाँ कोर्ष सुरु : शंकर पोख्रेल मङ्लबार, मंसिर ५, २०७४0responses प्रकास भुजेल/काठमाण्डौं दाङ, क्षेत्र नं.२ (क) वाट प्रदेशसभा उम्मेदवार शंकर पोख्रेलले नेपालको राजनीति नयाँ...
सुरक्षा निकायलाई ‘हाइ अलर्ट’मा रहन गृहको निर्देशन मङ्लबार, मंसिर ५, २०७४0responses काठमाडौं, निर्वाचनमा सुरक्षा चुनौती बढ्न थालेपछि सरकारले आजदेखि निर्वाचन लक्षित विशेष सुरक्षा रणनीति अपनाउने...
Tweets by @AsianSamachar
पुष्पराज न्यौपाने (प्रधान सम्पादक)
झक बहादुर मल्ल (विशेष सम्पादक)
दुर्गा पौड्याल (सम्पादक)
Asian Samachar Kumaripati, Lalitpur, Nepal
Copyright © 2017 Asian Samachar. All Rights Reserved.
Maintained by :- Softech Foundation.